Goolhaye.com | Archive | Euro 2012
Qaramada Yurub ee soo baxay koobka aduunka kuwa kaalita labaad galay iyo ciyaartoyda waawayn ee kah aray
Home » Archives by category » Qaramada » Euro 2012
Posted on October 16, 2013'); ?> by goolhaye and saved under Euro 2012, Maxaa Cusub
Guruub A ayaa waxaa kaalinta koowaad galay oo koobka aduunka ka ciyaari doona qaranka Belgium halka xulka Croatia uu ciyaari doona labad kulan ee kala baxa ah, Waxaa ka haray guruubkan qaramada kala ah Serbia iyo Waleska. Laacibiinta ukala ciyaara Serbia ee Klasnic iyo Vidic ayaan koobka aduunka ka haray…
12-kii Waxyaabood ee ugu muhiimsanaa Kubadda Cagta 2012
Posted on December 28, 2012'); ?> by goolhaye and saved under Brazil/Argentina, England, Euro 2012, France, Germany, Holand, Horyalaada, Italy, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub, Other, Portugal, Qaramada, Soomaalia, Spain, Suuqa, Taariikh, Wargaysyada
Xili uu sanadkan 2012 uu dhamaad yahay ayaa xiriirka maamula kubbada cagta ee FIFA waxaa uu soo bandhigay 12-kii dhacdo ee ugu xasuusta badneyd sanadkaan . 1. Ilbiriqsigii Taariikhiga ahaa ee Xulka Zambia uu markiisii ugu horreeyay ku qaaday koobka qaramada Africa 2. Bad baadadii xidigii hore Bolton Fabrice Muamba…
Vicente del Bosque oo kahadlay Weeraryahanada qarankiisa ee Villa, Torres, Michu iyo kuwa kale
Posted on December 13, 2012'); ?> by goolhaye and saved under Euro 2012, Maxaa Cusub, Qaramada, Spain
Tabababaraha Kooxda Spain Vicente del Bosque ayaa sheegay inuu tageersan yahay qaabka maamulka ee uu tababaraha Barcelona Tito Vilanova ula dhaqmo ciyaarryahanada mudada dhaawaca ahaa ee David Villa. Ciyaaryahankan ayaa kasoo laabtay dhaawac jab lugta ah oo soo gaaray xili ciyaareedkii hore kaas oo ku kenay inuu seego ciyaaro badan…
Qiimeynta Xulalka aduunka oo lasoo bandigay iyo England oo kaalinta 3-aad gashay
Posted on August 8, 2012'); ?> by goolhaye and saved under England, Euro 2012, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub, Qaramada
Xulka qaranka dalka Ingiriiska ayaa soo galay kaalinta 3-aad ee qiimeynta Bilaha ah ee Xariirka kubada cagta aduunka FIFA. Waa halkii ugu sareysay ee ay qaranka England ka gaaraan qiimeyntan iyagoo ku garaacay Kaalinta seddexaad qaranka Uruguay oo haatan ku jira kaalinta afaard. Qaranka haysta koobka aduunka iyo kan qaarada…
Hulk. Neymar iyo Pato oo lagu soo daray ciyaaryahanadda Brazil kaga qeyb galaya London 2012 Olympics “Liiska Brazil”
Posted on July 6, 2012'); ?> by goolhaye and saved under Brazil/Argentina, Euro 2012, Maxaa Cusub, Qaramada
Qaranka Brazil ayaa magacaabay ciyaaryahanada ka qeyb galaya Olimbikada aduunka iyadoona lagu soo daray weeraryahanka kooxda Porto Hulk, daafaca garabka ee Real Madrid Marcelo iyo xidiga AC Milan daafaca dhexe uga ciyaara Thiago Silva waana sedexda ciyaaryahan ee da’da weyn ee uga qeybb galaya London 2012 Olympics. Daafaca kooxda Manchester…
FIFA oo ansixisay aalada sheegaysa hadii uu gool dhasho ‘Warbixin”
Posted on July 5, 2012'); ?> by goolhaye and saved under England, Euro 2012, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub, Qaramada
Cilmiga Goal-line ayaa lagu soo biirayay ciyaaraha kubada cagta taas oo noqonaysa go’aan taariikhi ah sida ay sheegeen xariirka caalamiga ah ee FA Board (IFAB). Labo hab oo ay soo kala saareen Hawk-Eye iyo GoalRef, ayaa la ansixiyay kadib markii ay kulan yeesheen gudiga sharci dajinta ciyaaraha aduunka ee IFAB,…
Roberto Di Matteo oo xaqiijiyay in Daniel Sturridge uu isbitaalka yaalo uuna xanuusanayo
Posted on July 4, 2012'); ?> by goolhaye and saved under England, Euro 2012, Maxaa Cusub
Tababaraha kooxda kubada cagta Chelsea Roberto Di Matteo ayaa xaqiijiyay in ciyaaryahan Daniel Sturridge uu qabo xanuunka meningitis laakiin uu rajaynayo in uu kamid noqdo ciyaaryanhanada England uga qeyb galaya Olympic-kada aduunka Weeraryahankan 22-jirka ah ayaa mudo todobaad ah la xanuusan cudurkan waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in macalinka…
Xulka Spain oo wali hogaaminaya qiimeynta FIFA iyo England oo kor usoo kacday
Posted on July 4, 2012'); ?> by goolhaye and saved under Euro 2012, Koobka Aduunka, Maxaa Cusub
Qaranka haysta koobka Euro 2012-ka iyo kan aduunka ee Spain ayaa wali hogaaminaya qiimeynta bilaha ah ee FIFA ay samayso. Spain ayaa ku jirta kaalinta koobad iyadoona xulka England uu kor usoo kacay labo darajo. Xulka Ingiriiska oo ku haray 8-dhamaadkii Euro 2012-ka ayaa labo darajo kor usoo kacay iyadoo…
Daawo Sawiradda: Germany oo awood usheegatay Holland iyo Wiilasha Holand oo ay xaaladu ku xun tahay
Posted on June 14, 2012'); ?> by goolhaye2 and saved under Euro 2012, Maxaa Cusub
Weeraryahanka qaranka Germany Mario Gomez ayaa ahaa geesiga ciyaarta isagoo labo mar soo taabtay shabqa kooxda Holland oo mar kale xalay guul daro ay soo gaartay. ’Kahor goolasha Gomez ayaa ciyaaryahan Robin van Persie uu ka naxsaday xulka Germany isagoo ku dhawaaday in uu shabaqa soo taabto. Laakiin xidiga dhaliyaha…
Portugal oo si dirqi ah kaga badisay qaranka Denmark “Sawiro”
Kadib guul daradii Portugal kasoo gartay qaranka Germany kulankii ugu horeeyay ee Euro 2012-ka ayaa waxaa ay xidigaha uu hogaamiyo C Ronmaldo kusoo laabteen wadadii guusha kadib markii ay ka adkaadeen wiilasha Denmark. Kooxda Denmark ayaa cariiri galisay sedexda dhibic ee Portugal kadib markii ay gool bareejo ah ka keentay…
Page 1 of 512345	Next
© 2013, ↑ Goolhaye.com
- Powered by WordPress - Designed by goolhaye Realtime Web Statistics